Qubee Afaan Oromoo barachuun qubee laatiin barachuu jachuudha – Kichuu
HomeAfaan OromooQubee Afaan Oromoo barachuun qubee laatiin barachuu jachuudha
Qubee Afaan Oromoo barachuun qubee laatiin barachuu jachuudha
Qubeen Afaan Oromoo barachuun qubee laatiin barachuu jachuudha. Qubee laatiin addunyaa tana keessaa biyyota hedduutu fayyadama. Arra qubee Afaan Oromoo tartiiba jijiiruun dhaloota haaraya jeequudha.
Fakkiin qorannoo kun kan agarsiisu daa’imman Oromoo inumaahuu daa’imman naannawa biroo caalaa kutaalee barnootaa jalqabaarratti qubee haalaan akka addaan baafachuu danda’anii dha. Rakkoon daa’imman kanaa qubeelee addaan baafatan sana (letter accuracy) walitti fidanii akka jechaatitti dubbisuu (word accuracy) danda’uu dhabuu akka ta’e mul’isa fakkiin kun.
OPDOn garuu ijoolleen qubee addaan baafattee baruuf tartiibni isaa waan dhibeef tartiiba qubee jijjiiruun ni barbaachisa jetti. Kun faallaa qorannumtii isaanii agarsiiseeti. Ijoolleen rakkoo akkasii akka hin qabne fakkiin qorannoo kun ni agarsiisa.
The above fig shows Oromo kids having the highest letter accuracy (contrary to OPDO’s
argument),above average word…
Findings of the research ABSOLUTELY contradict what the OPDO wants to tell us. Problem lies with “decoding skills” NOT with “letter naming”
The findings in their own research suggested in fact the opposite of what OPDO says should be done. Gaps clearly show problem being teaching method. https://t.co/hq1Q02T7Rr
TPLF’s worst education policy did victimize more children in Oromia & Sidama than any other parts of the country. #OromoRevolutionhttps://t.co/Wokkuyvyw3
According to the TVO report, the change in the alphabetical order of scripts for the primary school children has also been effected in the Amharic language. Does that mean that they also did change the order of alphabets on the Geez scripts table too? If that is so, the Amhara will certainly rebel — and they absolutely got a point to do that, for sure.
And given the reasons OPDO told us, I guess the potential scripts to start with the new Geez alphabet could possibly be: ገ …ተ… ረ…..
Gaafa barnoonni qubee Afaan Oromoo A irraa dhiisee L irraa eegaluufi jedhamu qoosaan se’ee ture. Jijjiirama guddaa akkanaa kanaaf sababa kan jedhame qorannoo USAID’n dandeettii daa’imman kutaalee jalqabaa dubbisuuf qaban madaaluuf godhame jedhameera. Gaafa qorannoon sun bara 2010 bahe ala kanattis miidiyaalee irratti mariin godhamaa ture. Facebook fi VOA irratti marii goonee turre. Yoon sirritti yaadadhe qorannoon sun Oromiyaa dabalatee naannolee saddeet fi afaanota jaha irratti godhame. Rakkoon daa’immaan kuta 1-3ffaa dubbisuu dadhabuu kun rakkoo Itoophiyaa guutuu ( naannolee fi afaanota qorataman cufaa) akka tahetti kaaye qorannoon sun. Rakkina kanaafis sababoota hedduudha kanneen akka leenjii barsiisaa, dhiheessii kitaabotaafi kkf tarreesse. Laafinni hamaan barnoota kutaalee jalqabaa kun Afaan dhalootaa qofarratti osoo hin taane afaan Ingilizii, herregaanfi saaynsii irratti akka tahe qorannoon kutaa 4ffaa irratti godhame ni agarsiisa. Akka biyyatti daa’immaan dhibbeentaa 15% gaditu dandeetti bu’uraa mirkaneessuu danda’e.
Rakkoo kana furuuf waan jijjiiramuu qabus hedduudha lafa kaaye qorannoon sun. Oromiyaa keessatti laafina jiru furuuf jijjirama godhuun gaarii ture. Jijjiramni sun garuu kan qorannoo jabaafi marii baldhaa hayyoota damee afaaniifi barnootaaa jidduutti godhamu irratti hundaayuu qaba ture. Hubadhaa rakkoon dubbisuu kun Oromiyaa qofa osoo hin taane naannoleefi afaanota biroottis muldhatee jira. Naannoleen sun hoo furmaata akkamii yaadan? Waliin mari’achuu feesisa ture. Akkasumas qubee Laatiniin kan barreeffamu afaan Oromoo qofaa miti. Afrikaa hamma Ashiyaafi Latin Ameerikaatti afaanota danuutu itti fayyadama. Rakkoon dubbisuu yeroo daa’imman mudatu Afaanota meeqatu qubee A irraa eegaluu dhiisee L irraa jalqabsiisuu murteesse laata? Yoo jiraatan hoo jijjiramni argamsiise hammam quubasaadha? Osoo jijjiramni guddaan akkanaa hojiitti hin hiikamin gaafilee kanaaf kan biroof qorannoodhan deebiin laatamuu qaba ture. Kana gochuu dhabuu isaatin biiroon barnoota Oromiyaa badii guddaa hojjate. Afaanfajjii amma uumameefis itti gaafatamummaa qaba. Ammas osoo hin turre sirreessuu qaban.
Tartiiba qubee jijiiruun fumaata hin ta’u.
Via :Jawar Mohammed
Global Order In A Post-United Nations Era- Huffington Post
Kitaaba kana meeqan keessantu beeka laata? Hayilee Fidaa bara 1972
Yaa saba keenya dubbing afaanif qubee wajjiin waan huuba ijaalle walqabata hinqabu. Dubbiin biyyaafi saba waan humnaan gadiqabani dhuubfataniif akkafedhanitti bulchudha. Waanfeene yeroobarbaanne akkabarbaanne godhu dandeenya maalabbaakeessani taayan jechudha. Yooquba funyaan jokin huduu isin keenyes xiixu hindandeessan jechudha. Ajandaa sabni irratti haasawus tooftaa akkanaatin akka bishaan jallisi gara barbadanitti jajallifatu. Dubbi haahubannau, ijja simbiraatin haalaallu!!